တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံက ကမ္ဘာကြီးအတွက် မြင့်မားသောစံနှုန်းများ ဖြစ်စေကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား - Xinhua News Agency
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bilawal Bhutto Zardari ၏ ပြောကြားချက်
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ မေ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အားကောင်းသော ကိုဗစ်လုံးဝကင်းစင်ရေး(zero-COVID) ချဉ်းကပ်နည်းအား ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံသည် ကမ္ဘာကြီးအတွက် မြင့်မားသောစံနှုန်းများကို ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bilawal Bhutto Zardari က မေ ၁၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအနေအထားက သိပ္ပံပညာ နဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ်မှာ အားထားပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့စံနှုန်းတွေကို သတ်မှတ်ပြီးတော့ နိုင်ငံသားတစ်ဦးစီတိုင်းရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးကို သေချာစေဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေအားလုံး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရာတွင် တရုတ်အတွေ့အကြုံများမှ တဆင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက အများကြီးသင်ယူခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်း၌ သေရေး ရှင်ရေးတမျှဖြစ်သော စိန်ခေါ်မှုများအား ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့ အကူအညီများ ပေးပို့သည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို တောက်လျှောက် ကျွမ်းကျင်မှုတွေသာမကပဲနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ အခြားကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ကူညီခဲ့တဲ့ကို ဘယ်တော့မှ မေ့သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။”ဟု ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် စမတ်ကျသော lockdown မဟာဗျူဟာတစ်ခုအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ရောဂါပျံ့နှံ့မှုအား ထိန်းချုပ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများ ထူထောင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းသည် အကန့်အသတ် ရှိသော်လည်း ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံများမှ ကူညီမှု နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ မြေပြင်အခြေအနေမှန်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် စမတ်ကျသော lockdown မဟာဗျူဟာသည် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China #Pakistan #zero-COVID #တရုတ်နိုင်ငံ #ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ #ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
China’s handling of COVID-19 pandemic sets high standards for world: Pakistani FM
ISLAMABAD, May 14 (Xinhua) — Pakistani Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari said on Saturday that China’s handling of the COVID-19 pandemic by adopting dynamic zero-COVID approach has set high standards for the world.
“We will never forget the way that the government and the people of China have assisted us not only through expertise but also through vaccines and other relief,” Zardari said.
The strategy of smart lockdowns by considering ground realities of Pakistan and help from friendly countries like China has playedavital role in this regard despite the country’s limited capacity to deal with the pandemic. ■